Good writing, great post.
တစ်ခါတည်းဘလော့ပိုစ်ငါးခုလောက်ကို ဆက်တိုက်ဖတ်သွားချင်ပါတယ်။ ဟိုကလစ်ဒီ ကလစ်ကို စိတ်မရှည်ပါ။ အချိန်ကုန် ၏
I agree with KOM
ကျမလည်း ပြောမလို့ဘဲ။ မခင်ဦးမေပြောသလို ပို့စ်တွေဆက်တိုက် ဖတ်ရတာမျိုးက ပိုအဆင်ပြေတယ်။
ဟိုကလစ် ဒီကလစ်က သိပ်အဆင်မပြေဘူး။
ဒါနဲ့ အောက်ဆုံးမှာ ကြော်ငြာလဲ တွေ့တယ်နော်။ အခမဲ့လား။ အခနဲ့လား။ :)
မခင်ဦးမေ...ကိုပီတာကျော် နဲ့ မမေဓါဝီ....
Feedback အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမေဓာဝီ.... အဲဒီ ကြော်ငြာက အခမဲ့ပါ။ ကျနော်ကူညီထိုက်သူများကို ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က အကူအညီပေးတဲ့ သဘောပါ။
ကမ္ဘောဒီးယားက အန်ကာဝပ်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီဆိုင်မှာ စားဖို့ ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။